Ka -hortaga sonkorta, ogaanshaha, daaweynta. - Amjambo Africa
Maine gudaheeda, sonkorowgu waa sababta ugu horreysa ee keenta cudurka wadnaha iyo istaroogga. Kahor inta uusan masiibada COVID-19 si weyn wax uga beddelin muuqaalka caafimaadka ee Mareykanka, sonkorowgu wuxuu ahaa kii toddobaad ee horseeday dhimashada Mareykanka. Cadadkan Nofeembar, Amjambo Africa waxay bixisaa macluumaad ku saabsan sonkorowga si loogu caawiyo Macalimiinta inay doortaan hab -nololeedka u horseedi kara nolol dheer, caafimaad leh.
Waa maxay macaanka?
Sonkorowgu waa cudur raagaya, oo raaga oo saameeya sida qofka jidhkiisu cuntada ugu rogo tamar – taas oo dhacda in inta badan cuntada lagu jebiyo sonkor la yiraahdo glucose. Cunista ka dib, xaddiga sonkorta lagu sii daayo dhiiga (heerka sonkorta dhiigga) ayaa kor u kacda. Iyada oo laga jawaabayo kororkan, jidhku wuxuu soo saaraa hormoon la yiraahdo insulin, kaas oo ka caawiya unugyada, unugyada, iyo muruqyada inay sonkorta u isticmaalaa tamar. Insulinta ayaa markaa hoos u dhigaysa heerka sonkorta dhiiga ee jirka.
Hadii qof qabo sonkorow, jidhkiisa midkood 1) ma samayn karo insulin ku filan (Nooca 1aad ee Sonkorowga); ama 2) ma isticmaali karo insuliinta ay samayso iyo sidii ay ahaydba (Nooca 2aad ee Sonkorowga iyo Sonkorowga Uurka). Waqti ka dib, heerarka sonkorta dhiigga oo sare u kacda waxay u horseedi kartaa dhibaatooyin caafimaad oo daran. Xaaladaha caafimaad ee la xiriira sonkorowga waxaa ka mid ah aragga oo luma, cudurka kalyaha, istaroogga, iyo wadna xanuunka.
Waa maxay macaanka horudhaca ah?
Tani waxay ka dhigan tahay inay halis ugu jiraan inuu ku dhaco sonkorowga. Prediabetes -ku wuxuu u gudbayaa Nooca 2aad ee Sonkorowga haddii heerarka sonkorta dhiigga ay sare u kacaan waqti ka dib. Sonkorowga Nooca 2 waa nooca ugu badan ee macaanka. Xarunta Maine ee Xakamaynta Cudurrada (CDC) waxay ku qiyaastay in qiyaastii 7 ka mid ah 20 -kii Maineeba ay yihiin kuwo sonkorow ah.
Uurka changes Isbeddellada la xiriira uurka ayaa dumarka qaarkood halis geliya inay yeeshaan nooc ku meel gaar ah oo ah nooca 2aad ee macaanka oo la yiraahdo sonkorowga uurka. Jess Doughty, oo ah kalkaaliye caafimaad oo qoyska ka tirsan oo daryeela dadka qaba sonkorowga Maine Medical Partners Diabetes and Endocrinology Center iyo Maternal and Fetal Medicine Division, T] bulshada Afrika waxay leedahay heer aad u sarreeya oo ah sonkorowga uurka oo sii kordhaya waqtiga. Dhammaan dumarka soo -galootiga Afrikaanka ah waa in laga baaraa sonkorowga uurka goor hore oo uurka ah … si looga hortago dhibaatooyinka ka yimaada sonkorowga hooyada iyo dhallaankaba. Sonkorowga uurku isku mid ma aha qof kasta – dumarka qaarkood waxay u baahan doonaan insuliin si ay uga caawiso xakamaynta sonkorta dhiigga, qaarna ma yeeli doonaan, halka qaarkood ay awoodi doonaan inay adeegsadaan waxqabad si ay uga caawiyaan maareynta sonkorowga, qaarna ma awoodaan inay sameeyaan kan. Laakiin dhammaan haweenka qaba sonkorowga uurka waxay u baahan yihiin waxbarasho iyo booqashooyin joogto ah oo ay la yeeshaan khabiirka sonkorowga si loo hubiyo in hooyada iyo dhallaanka labaduba ay caafimaad qabaan intii suurtogal ah.”
Dumar badan, xitaa kuwa ay tahay inay isticmaalaan insulinta inta ay uurka leeyihiin, astaamaha sonkorowga uurku way baxaan marka ilmahoodu dhasho. Si kastaba ha ahaatee – taasina waxay lid ku tahay waxa dad badani rumaysan yihiin – tani macnaheedu maaha inay ka bogsadeen cudurka. Dumarka qaba sonkorowga uurka waxay leeyihiin khatar aad u sareysa (40-50% ka sarreysa) inay yeeshaan sonkorowga Nooca 2 goor dambe oo nolosha ah.
ker Abdulkerim Said, Agaasimaha Fulinta ee New Mainers New Health Public Initiative, ayaa ku warramaya in xubno badan oo ka tirsan bulshada Afrika ee ku nool aagga Lewiston/Auburn ay ka welwelsan yihiin sonkorowga oo ah halis caafimaad kadib markii dhowr caruur ah ay buurnaadeen iyo nooca 2aad ee macaanka. “Sonkorowgu waa walaaca ugu weyn ee bulshooyinka New Mainer, laakiin ma jirto waxbarasho ama ilo aan annaga wax ka qaban karno. Waxa ugu adag halkan waa jadwalka. Afrika waxaan cunnay khudaar daray ah iyo kalluun cusub. Gacanta ayaan ku maydhnay dharkayagii iyo suxuunnadii, waxaan an biyahayagii ka soo qadnay ceelka. Ma lihin barxadaha dambe ama jimicsiyada aan halkan ku jimicsano, ama 30 daqiiqo maalintii si aan tababar u sameyno. ” Saciid wuxuu ka hadlay qoysas badan oo loo soo gudbiyey takhtar cunto si ay wax uga bartaan nafaqada sonkorowga, laakiin ikhtiyar ka kaliya ee loo siiyay turjumaanka ayaa ahaa hawal wadeen taleefan. “Turjumaan taleefan u ah waxbarashada sonkorowga uma shaqeeyo Macallimiinta Cusub. Hooyooyinka waxay rabaan inay caawiyaan, laakiin ma yaqaan in waxay sameeyaan. ”
Maxay yihiin Caqabadaha halista sonkorowga? Kuwaas waxaa ka mid ah:
• Lahaanshaha sokorowga hore ama sokorowga uurka Being • Miisaankaaga oo xad dhaaf ah • Da’da 45 sano ama ka weyn • Lahaanshaha waalid, walaal, ama walaalo qaba nooca 2aad ee sonkorowga • Inuu jir ahaan firfircoon yahay wax ka yar 3 jeer todobaadka. • lahaa sonkorowga uurka ama dhalashada ilmo • miisaankiisu ka badan yahay 9 lb./4kg. • Ahaanshaha Afrikaan Ameerika, Hisbaanik/Laatiin • Ameerika, Hindida Ameerika, ama Dhaladka Dhaladka • Alaskan (qaar ka mid ah Jasiiradaha Baasifigga iyo • Aasiya Ameerika ayaa iyaguna khatar sare ku jira).
Waxaa jira calaamado aad u yar oo la garan karo ee nooca 2aad ee sonkorowga, si kastaba ha ahaatee Ururka Sonkorowga Mareykanka wuxuu taxaa calaamadaha soo socda ee suurtogalka ah
• Kaadida oo badanaa
• Dareen aad u harraadsan
• Dareen gaajo – in kasta oo aad wax cunayso
• Daal aad u daran
• Aragga oo xumaada
• Jirrooyin/nabarro ka gaabiya bogsashada
• Miisaanka oo yaraada – in kasta oo aad wax badan cunayso ( nooca 1)
• Xanaaq, xanuun, ama kabuubyo gacmaha/cagaha (nooca 2)
Iska -indho -tiridda astaamaha waxay u horseedi kartaa sonkorowa ka hor ilaa Nooca 2 aad ee Sonkorowga , cudurka wadnaha, iyo istaroogga. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in dhakhtar la arko sanad kiiba mar oo la baaro heerka sonkorta dhiigga ee qofka
Sidee loo Daweeyaa Sonkorowga?
Sonkorowgu wuxuu u baahan yahay in si dhow loola socodo heerka sonkorta dhiiga iyo ballamaha dhakhaatiirta ee joogtada ah. Insulin waa dawada koowaad ee loo isticmaalo in lagu daweeyo Nooca 1, Nooca 2, iyo Sonkorta Uurka
Nasiib, sonkorowga dawooyinka sonkorowga iyo booqashada joogtada ah ee dhakhtarka ayaa qaali ah, taasoo ka dhigaysa qiimaha sare ee daryeelka sonkorowga mid aan suurtogal u ahayn inay ku noolaadaan Maine oo aan heli karin Mainecare. Tan waxaa ka mid ah dad badan oo midab leh, oo ay ku jiraan muhajirin.
Aww Cuntooyinka ay ku jiraan karbohaydraytyada ayaa lagu jajabiyaa sonkor, sida gulukooska. Cuntooyinka qaarkood waxaa ku jira karbohaydraytyo fudud oo si dhakhso leh dhiigga ugu sii daaya gulukoos badan. Tani waxay keentaa in si degdeg ah u kordho heerarka sonkorta dhiga. Kaarboohaydaraytyada fudud oo leh sonkor badan waa in ay cunaan qadar yar kuwa ka shaqeeya ka -hortagga sonkorowga sababtoo ah karbohaydraytyada aan cunno waxay saameeyaan heerarka sonkorta dhiigga. Misanku waa furaha. Tusaalooyinka qaar ka mid ah cuntooyinka karbohaydraytka fudud ee cuntada cadiga ah ee Afrikaanka ah waa caano, kasaafada, fufu, bariis cad, geedo, moos, digir (nooc kasta), iyo cambe. Tusaalooyinka qaar ka mid ah cuntooyinkan ee cuntada cadiga ah ee Ameerika waa keega, buskudka, jajabka, rootiga cad, iyo soodhaha. Si aad caafimaad u heshid oo aad uga hortagto sonkorowga, yoolku waa in sonkorta dhiiga lagu hayo heer isku mid ah inta lagu jiro maalinta, iyada oo aan sonkorta dhiiga soo boodin. Cuntooyinka la yidhaahdo karbohaydraytyada isku dhafan ayaa wakhti badan u qaada jidhka si uu u sameeyo dheefshiido, oo gulukoos ku sii daayo dhiigga si tartiib tartiib ah. Tuulooyinka qaarkood waa bariis bunni ah, rootiga hadhuudhka oo dhan, misir, broccoli, yaanyada, iyo digirta.
Sida looga hortago sonkorowga?
Joogtaynta miisaanka jidhka oo caafimaad qaba, ka fogaanshaha sigaarka, cunedda Cuna dheeli tiran , iyo samaynta dhaqdhaqaaq jidheed oo joogto ah ayaa ah siyaabaha ugu waxtarka badan ee looga fogaado sonkorowga.
Si kastaba ha ahaatee, ma qof baa laga helaa sonkorowga hore, miisaanka oo yaraada iyo ku daridda dhaqdhaqaaqa jireed oo joogto ah ayaa hoos u dhigi kara halista ah inuu ku dhaca sokorowga nooca 2. Qadar yar oo miisaan lumis ah macnaheedu waa qiyaastii 5% ilaa 7% miisaanka guud ee qofka, ama 10 ilaa 14 rodol oo qof 200-rodol ah. Dhaqdhaqaaqa jirka ee joogtada ah waxaa loola jeedaa in la helo ugu yaraan 150 daqiiqo toddobaadkii socod degdeg ah ama hawl kale oo la mid ah. Taasi waa kaliya 30 daqiiqo maalintii, shan maalmood usbuucii.
Barnaamijka Ka -hortaga Sokorowga Qaranka, oo ay hoggaamiso CDC, wuxuu bixiya barnaamijyada wax -ka -beddel hab -nololeed hab -dhaqan ah oo lacag la’aan ah iyada oo loo marayo cusbitaallo badan oo Maine ah iyo ururada bulshada. Macluumaad ku jira xiriirkan. Ama booqo Maine CDC ee dhowaan la daah furay RETHINK Diabetes ME.
Ku noolaanshaha Maraykanka waa arrin halis
Ah markii aad u guurtay go’aamiyeyaasha Caafimaadka Bulshada sida cunsuriyadda, helitaanka daryeel caafimaad, xaalada muwaadinnimo, iyo shaqo ayaa dhammaantood la muujiyey inay sare u qaadayaan halista ah inuu ku dhaco sonkorowga.
Isla mar ahaantaana, cilmi -baarista waxay muujineysaa in hagaajinta waxbarashada sokorowga ee soo -galootiga iyo dadka midabka leh ay fure u tahay yareynta halista jirrada. Sababtaas awgeed, CD-ga Maine wuxuu la shaqeynayaa ururada bulshada sida Shabakadda Soogalootiga Helitaanka Maine (MAIN), iyo shaqaalaha wacyigalinta caafimaadka bulshada (CHOW’s) si ay u siiyaan waxbarasho dhaqanka-u-habboon iyo hagaajinta helitaanka daryeelka caafimaadka ee luqadaha aasaasiga ah ee dadka.
Rajadu waxay tahay in marka dadaallada baaritaanka ay sii bataan, oo siyaasad dejiyayaasha, hogaamiyaha nidaamka daryeelka caafimaadka, iyo hay’adaha adeegga bulshada ay maalgashadaan ka -hortagga sonkorowga, tirooyinka kiisaska sii kordhaya ayaa la xakameyn doonaa. Mustaqbalka caafimaad qaba ee dad badan oo ku nool Maine ayaa halis ku jira.
PreviousKa hadalka ku -xadgudubka mukhaadaraadka iyo qabatinka
NextWanaagsan – waxaad bilowday ganacsi. Hadda maxaa?